Ndiyakholelwa kwiWebhu 3.0! | Martech Zone
Esi silayidi sinokuvelisa ukugcuma kunye nokugcuma xa ndisibonisa phambi kwabahlobo bam. Kuya kufuneka ndiyibonise, nangona. Kukho iintshukumo ezinobulumko kwiwebhu ngaphambili. SasineWebhu ye-0.0 eyayisisiseko kunye neebhodi zezibhengezo. Uyayikhumbula loo mihla? Ilinde umfanekiso ulayishe umgca ngomgca kunye nemodem yakho eyi-1200 ye-baud! (Ewe, ndiyazi ukuba ndimdala!)
I-Web 1.0 ngokwenene yaba lixesha lokulawula kunye nolawulo. I-AOL (khumbula 'faka igama eliphambili Igama loqhagamshelwano Cherry) ibambelele kakhulu kumnatha kwaye indawo ezingaphezulu nangaphezulu zokungena zavela kwi-Intanethi. Ukuba ufuna umntu akufumane, oko kukuxabise kakhulu nge-ad banner kwiwebhusayithi yengingqi.
IWebhu 2.0 iselixesha lolawulo- kodwa ngoku iiNjini zokuKhangela, ezizezi Uphando, ungumnikazi wezithuthi zewebhu. Sisekhona kwi-Web 2.0 namhlanje-ukuba indawo yakho izakufunyanwa, kungcono uyifumane kwiziphumo zokukhangela. Iwebhu yoluntu ngoku iqala ukuvela, nangona kunjalo. Abantu bayahlangana kwaye ukwabelana ngeebhukumaka ngokusebenzisa Izicelo zeblogi ezincinci kunye neebhukhmakhi zentlalo.
I-Web 2.0 yabona ukwehla kokwabelana ngefayile nokwabelana ngefayile ngokunjalo. Napster Yabhukuqwa kwaye abahlaseli, abaqhekezi kunye namasela kwafuneka baye phantsi komhlaba. Iiseva zommeleli ezingaziwayo kunye nemilambo edlula kwiPirate Bay iye yangena kwindawo ephambili njengoko 'isimahla' isala lixabiso le-Intanethi.
Iwebhu 3.0 = Ukwehla ukuKhangela kuKhangelo
Iwebhu 3.0 ilandelayo, Kwaye ndiyakholelwa ukuba isenokuba yiWest West kwakhona! Iinjini zokukhangela zilumke njengoko abantu bezilungiselela, besabelana ngomxholo wabo ngokudityaniswa (kwiWebhu yeSemantic), iinethiwekhi ezincinci, kunye nokusetyenziswa kwe-hybrid ezisebenza ngaphandle nangaphandle kwaye zibandakanya ukusetyenziswa kwefowuni.
Iwebhu 3.0 = Ubugqirha
Ukuvota kwam kukuba ubuqhophololo buya kwenza i-HUGE leap njengoko inyani yokuqhubekeka koontanga iqhelekile ngokusebenzisa iidilesi ze-IP eziya ziba kratya kunxibelelwano lwasekhaya oluphezulu. Ngemihla kaNapster, oontanga-to-peer babethetha peer-to-Napster-to-peer. UNapster wayelisango lalo lonke unxibelelwano. Ukubheja kwam kukunxibelelwano oluncinci apho ungadibanisa khona usetyenziso lwakho kunye nabahlobo abathembekileyo kwaye uthumele iifayile ngaphandle kweseva (ngaphandle kwe-ISP yakho) usazi. Iifayile ngokwazo aziyi kwaziwa, nangona kunjalo, ngeendlela ezithile zokubhala ngokufihlakeleyo.
Ngamanye amagama, ulwabiwo oluqhelekileyo lweeCD kunye nokuqhutywa komculo phakathi kwabafundi namhlanje kuya kuhamba kwizicelo ezivumela ukwabelana ngaphandle komntu ophakathi. Uxinzelelo kumzi mveliso weMusic kunye neMovie kurhulumente luya kuba LUHLE ukuze sikwazi ukuhlola iinethiwekhi zethu zasekhaya ukuzama ukulandela umkhondo kunye nokohlwaya le ntshukumo intsha yabaphangi. Umnqweno omhle!
Iwebhu 3.0 = Intengiso ngqo
Kunye nokwehla kolawulo lweinjini yokukhangela, ukufika kwentengiso 'yokuzilawula' kuya kukhula. I-Google ayisayi kuphinda icime intengiselwano phakathi kwabathengisi kunye nabapapashi, ubuchwephesha obutsha buya kuvumela abathengisi ukuba balawule ezabo iintengiso kubapapashi abanqwenela- kwaye abapapashi baya kuhlawulwa ngqo.
tags: semantic3 web3.0 web
Epreli 29, 2008 ngo-2: 08 AM
Ndinomdla kumagqabantshintshi malunga nobugqwetha kwixesha elitsha eliza kuba yiwebhu 3.
Kule veki kuphela, i-MS ikhuphe ibung enkulu ngotshintsho lwayo
Ndiyabona imeko apho uninzi lwezicelo ziya kusetyenziswa ngendlela yobhaliso kwaye usuku luza kwi-IMO xa ikhompyuter entsha iya kuba simahla ngokubonelela ukuba uyavuma ukuhlawulela usetyenziso lwakho lwesoftware ngokusebenzisa indlela enemitha kunxibelelwano lwakho lwe-BB.
Kudala ndibukele ukubambana kweenkampani kwindawo yokusasaza kwaye njengoko iinzame zetekhnoloji zibonisa, i-jukebox yesicelo sayo iya kuba ngumrhumo ophambili kwiindawo zokubeka i-IT nakwiivenkile zesoftware ngokufanayo.
Epreli 29, 2008 ngo-10: 42 AM
Isoftware njengenkonzo ngokuqinisekileyo iyabulala ubugqwirha… ndicinga ukuba okulandelayo iya kuba zizicelo ezingena kwii -apps ze-SaaS. Xa ndandixubusha ngobuqhetseba - bekufanele ukuba bendithetha ukuba ndithetha umda kwimidiya enje ngomculo, ividiyo, njl.
Ukuqonda okukhulu, enkosi!
Epreli 29, 2008 ngo-6: 54 AM
Molo apho uDoug,
Ndiyazithanda izimvo zakho kunye nokuqonda kwibhokisi yam yemihla ngemihla. Enkosi kakhulu!
Kutshanje bendisiva i-racket malunga nokuba iya kuba yintoni i-Web 3.0. Ke, iposti yakho ifike ngexesha. I-iTunes ibonisa ukuba abantu bayakonwabela ukuthenga umxholo ngokuthe tye kwaye emxinwa ukuba amava 'ahlawulelweyo' angaphezulu kwamava abaphangi. (iTunes ngoku ngumthengisi womculo we- # 1 e-US)
Ndicinga ukuba umxholo wokuphanga 'linqanaba lomntu' kodwa ndiyathanda ukwazi ukuba ucinga ukuba iinkampani ezinje ngeApple ziya kwenza ntoni ngeWebhu 3.0, ndicinga ukuba ziya kuqala ukwenza into eyi-2.0!
Kudala ndibhala ibhlog yeFoodie malunga nedolophu endimi kuyo ngoku, eKyoto. Ndaqala malunga neenyanga ezili-8 ezedlulileyo. Ndithumele indawo yakho kwaye ndenza inkqubela phambili amaxesha ngamaxesha. Ngoku ndiye kwinqanaba apho ndifuna ukulibeka phambili ixesha. Senza uphando oluncinci lwentengiso ngoku kwaye sinikezela amabhaso ngeembono ezintle. Yima xa uthanda, ujonge ukutya! Sinentloko yeentlanzi ezinqunqiweyo, ityhefu ye-pufferfish egqityiweyo kwaye ityibilike ngenxa yokutshisa, njalo njalo.
Yijonge apha: Uvavanyo lweKyotoFoodie 'Win Junk'.
I-Web 3.0 iya kuba 'yiWest West kwakhona'? Ummm! Andikwazi kulinda !! YIZISE!!!
Ndiyayithanda indlela onomdla ngayo kwibhlog yakho, imigca yesifundo sakho intle! Kunyanzelisa kakhulu!
Epreli 30, 2008 ngo-9: 18 PM